Ulwazi lwemephu: Izolo, namhlanje kwaye mhlawumbi ngomso-iGeofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Imephu: Izolo, namhlanje kunye mhlawumbi kusasa
ArcGIS-ESRIGeospatial - GISMicrostation-Bentley
ImephuInfo yisoftware esele yenziwa rhoqo njengenye indlela yokhuphiswano kwisizinda se-ESRI. Kuninzi okubhaliweyo malunga nesi sixhobo, ndifuna ukunikezela esi sithuba siphonononge imikhwa kunokubanakho, ngokokufunda kwe-2008 iDaratech ebonakala kwindawo yesixhenxe ngokusekwe kwintengiso ka-2008 kunye neyesithandathu ngokwe-GIS yesiko . Ndingathanda kanjani ukwazi ukuba yeyiphi inxaxheba kumaqonga Vula Umnikezi ukuba ngoku iqondo elifanelekileyo lokukhula.
5 GE Energy (SmallWorld)
6 Leica (Erdas kunye nokunye)
Izolo: Enye indlela eya kwi-ESRI
ImephuInfo ivele kwiminyaka yee-80 ukuba ikhuphisane kwimanyano neMicrosoft ngokuchasene nezo zinto zimbini zazithetha ukuba yiArcView kunye neWorkstation Arc / Info; Zombini zivela kwindalo esingqongileyo ye-UNIX, enye ilula ngaphezu kokucekiseka kwaye enye i-astral kakhulu njengoko iya kuhlala ithathwa. Ke, kule panorama, iMapInfo ibonakala njengesisombululo esinexabiso elincinci kuneArcView, enembonakalo yobuhlobo kuba iyafana neWindows kodwa ineenguqulelo zombini zeMacintosh kunye neUNIX.
Okwangoku, ezinye zazingamanye amaza, iBentley yayingabalulekanga phambi kwee-geofumadas kuthetha i-Intergraph, AutoDesk Wayesilwa nehlabathi lakhe le-CAD, i-GE SmallWorld ayizange ibekho nasemaphupheni (kwaye ukuba bekungekho nge-GE ngekhe ibekho). Eyona ibikhona yayiyi-ERDAS, ngoku efunyenwe nguLeica kwaye yongezwa kwezinye izinto ezibonakalayo kwindawo yesithandathu.
Ngexesha elifanelekileyo I-Windows 95 ivele Sasimangaliswe ngezinto ezilula kakhulu ezintle kwiMaphuInfo, njengeqhosha esc ukuyeka ukuxhoma iinkqubo, ukusondeza ukujonga kuqala, Utshintsho kwizikhombisi ngaphandle kokuphulukana nekhonkco, ukuhanjiswa kwezinto, ukusebenziseka lula kokudibanisa enye kuninzi nakwezinye ezininzi. Izinto ezingakhange zenziwe yiArcView 2.1, kungasathethwa ke ngokudalwa kwemigca yokujikeleza, oko kukuthi ngokudityaniswa kwe-Vertical Mapper yokudityaniswa kweMapInfo, kunye neArc / Info kuphela ephethwe kodwa sele sazi ukuba yeyiphi indleko (phakathi kwe- $ 10,000 kunye ne- $ 20,000).
Ke MapInfo ngelo xesha baba enye elikhulu yeetawuli ithini ke ArcView 2x, baqhubeka imfazwe de 3x waza wabonakala umda engqondweni ukuba bambalwa khumbula izilingo.
Namhlanje, ithuluzi elinamandla
Abasebenzisi beMephuInfo bayayikhusela izinyo kunye nesikhonkwane, nangona bebazi ubuthathaka bayo (kwiinguqulelo ezingaphambi kwe-9) kunyango lwemifanekiso, kwamkelwe ukuba kuyimveliso yokuvelisa (iimephu zokuprinta) kuyamangalisa. Inomtsalane kakhulu ekusebenzeni kwesitayile se-AutoCAD, njengokulawulwa kongqameko kunye nokuhlelwa kwevektha, phakathi kwezinto ezindothusileyo, ukuthunyelwa ngaphandle kwe-pdf kulawulwa iziqendu, apho izalathisi ziyakucinywa okanye ziqhubeke nepaneli yecala.
Kwenzeka ntoni ukuba iMapInfo ibe yinkampani kawonke-wonke, kwaye kuxhomekeke ekubeni ngubani onezabelo ezininzi ezinzima xa kuthelekiswa neenkampani zabucala ezinjenge-ESRI kunye neBentley, ukunika imizekelo emibini. Ke ngoko, ukubona iMephuInfo kuya kufuneka uthathele ingqalelo ezi zigaba zahlukeneyo: ngaphambi kwenguqulelo yesi-7, ngaphambi kwenguqulelo yesi-8 naphambi kwenguqulelo 9. Kungoko ubungqongqo bayo Lifecycle kweemveliso.
Ukuba silinganise iMapinfo ngokuchasene neArcView 9x (ngaphandle kolwandiso), baya kwesohlwayo, kwaye siyayibetha ngokokusebenza. Ukuba siyilinganisile nge asibonise, Iphulukana ngokwe-geofumados kunye nexabiso, kodwa ibetha kwisizukulwana seemveliso zokuphuma kunye nendawo enobuhlobo. Ke iMapInfo sisixhobo esikhulu, somelele kakhulu kwimigangatho ye-OGC, iyancediswa ngeMapBasic, iMapXtreme kunye neRouting yokwakha usetyenziso lwesiko kungekuphela kwidesktop kodwa nakwiwebhu.
Kwinqanaba lomthengi, iMapinfo ixhasa iWMS, iWFS, iSFS kunye neGML; Ngelixa iseva yeMapMarker, iMapXtreme kunye no-Envinsa benza amaqhinga abo. ImephuXtreme izalisekisa zombini njengomthengi nanjengeseva.
Uhlengahlengiso lwenguqulo ye-10 ngumsi omkhulu, ngokusekwe kwiinguqulelo zangaphambili kodwa undinika umbono wokuba bayiguqulile ngathi ngumthengisi we-ice cream. Iyabonakala, endaweni yokuhlaziya ujongano, umzamo omkhulu wokwenza ubuthathaka obuninzi beenguqulelo zangaphambili zizalisekisiwe, kubandakanya ukusebenzisana kwayo nePostgre kunye nePostGIS kubaluleke kakhulu.
Ukuphazamiseka kwayo yonke into, kukuba yinkampani kawonkewonke, kwaye ifunyanwa ezininzi zezabelo PitneyBowes, I-MapInfo iyakwenzeka esinye isixhobo inkampani enkulu engenayo i-GIS njengeyona nto iphambili. Yintoni uPitneyBowes ayikhangelayo sisixhobo esinokuthi senze uhlengahlengiso lwe-geospatial kwiqonga lendawo, ukuze ukuthengwa kunokuba nobungozi kunokuba kulunge isixhobo.
I-omen yam iyimbi, kodwa ayenzeki kwinkampani yabucala, apho umdali wayo engaboni nje kuphela imali anokuyivelisa kodwa nekratshi lokuyibona izalwa kwaye ingekho ngaphandle kokuba imeko yezoqoqosho inganyamezeleki, ayisiyiyo yakhe yokuqala Phuma uthengise kwelona bhidi liphezulu okanye ucime ngenxa yokungabikho kwemveliso.
Ngethemba akunjalo, kuba ukuthatha kwabo inxaxheba kwimarike kubalulekile kwaye kungaphezulu kweemarike, ngabathengi abalindele ukugcina ukuthembeka kuwo omabini amacala. Izixhobo ezininzi endithethe ngazo apha, njenge Cadcorp y GIS asibonise Bafuna ukuba nelungelo.
Luhlobo luni lombono?
I-Mapinfo isisityebi esinamandla sokuphuhlisa iinkcukacha zokubamba idatha kunye neenkqubo zokuhlalutya. Kodwa kuya kuxhomekeka kwinto ocinga ukuba ucelwa ukuba kukunike isiluleko.
I-software ye-Mapinfo iyisicelo esinamandla, ukuba ufuna ukuthatha okanye ukuhlaziya idatha yendawo.
Ndiya kuphuhlisa iprojekthi yesikolo endicela ukuba ndisebenzise i-mapinfo kwimveliso yekhofi
Ngaba unganinika impembelelo yakho
Ewe, ndiyavuma malunga neempendulo ezimbi. Ndahlala kwinguqu ye-6, kwaye ngoku ukuba ndikhangele ulwazi lweMaphufo, ukuguqulwa kweedesi kubonakala ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, indlela entsha ayifani nonke, ndilahlekelwe elwandle kumhlathi ongenangqondo.